Somaliland Waa Qaran Guulaystay; Qaran Fashilmayna ma Haybsan Karo! (Q.2-aad) | Salaan Media
Somaliland Waa Qaran Guulaystay; Qaran Fashilmayna ma Haybsan Karo! (Q.2-aad)
June 28, 2013 | Published by: Hamse
W/Q: Eng. Hussein Adan Igeh | Hussein Deyr ||UK|
“Nabadda, Xasiloonida, Dawladnimada, Horumarka iyo Dimuqraadiyaddu midna deyn naguma aha, Dalkayaguna uma Rahmana! Samir, dulqaad, dedaal, garashada togan iyo quluubta wada-jirta ee ummadda Jam. Somaliland ayaa keentay guushaa la isku quudhi la’ayahay.”
Jam. Somaliland waa qaran beesha caalamka ka furtay hawl oo kaga beegmay xil iyo waajibaad ay iyagu lahaayeen isla markaana u bed-baadiyey wixii kharash, muruq iyo maalba kaga bixi lahaa nabadayntiisa, xasiloonidiisa iyo dib-u-dhiskiisaba; maadaama ay ummadda JSL iyagu isku tashadeen oo waxaasoo dhan ay dusha u riteen. Somaliland waa Qaran Guulaystay oo xil-kas ah si mug lehna uga soo baxay xilkii iyo masuuliyaddii ka saarnaa ummaddiisa.
Jam. Somaliland waa Qaran Guulaystay oo ku guulaystay inuu dadkiisa u horseedo Nabad, Degenaansho, Horumar, Dimuqraadiyad iyo Dawlad Wanaag, sidaana ku sifoobay 22-kii sano ee ina soo dhaafay!! Dhinaca kale, Dawladda iyo Shacabka JSL, iyagoon weli aqoonsi ka helin bulshada caalamka, haddana waxay si buuxda uga soo baxeen masuuliyaddii iyo waajibaadkii ka saarnaa dalalka deriska ah iyo guud ahaanba bulshada caalamka. Taasina waa tilmaamaha saldhigga u ah Qaranka Guulaystay
Ummadda Jam. Somaliland waxay si cad u ogyihiin una arkaan inay Bulshada Caalamku isdiidsiinayaan horumarka iyo dawladnimada buuxda ee ay ummadda JSL kartidooda kula yimaadeen. Beesha caalamku waxay indhaha ka lalinayaan rabitaanka ummadda JSL iyo xaqa ay u leeyihiin inay noqdaan qaran madax-bannaan oo ka mid ah bulshada caalamka. Halkii bulshada caalamku ay ummadda JSL u abaal-gudi-lahayd ee lagu abaal-marin-lahaa aqoonsi iyo ictiraaf buuxa; waxaynu aragnaa in bulshada caalamku ay kool-koolinayso Qaran Fashilmay oo ku saaqiday inuu ka soo baxo masuuliyaddii iyo waajibaadkii ka saarnaa ummaddiisa iyo beesha caalamka dhin kasta oo ay tahayba!
Haddaba, marka aad u fiirsato hab-dhaqanka iyo laba-wajiilaynta ay beesha caalamku kula dhaqmayaan Jam. Somaliland, waxaad mar-mar is odhanaysaa MALAHA Jam. Somaliland waxay si aan ku talo-gal ahayn ugu xad gudubtay Sharci Qarsoonoo ay dhigteen Quwadaha talada dunida loo daba-fadhiisto kaasoo nuxurkiisu ku soo ururayo arrimahan soo socda:
A. Nabadda, xasiloonida iyo degenaanshaha
Nabadda, xasiloonida iyo degenaanshaha ay ummad iyagu isku tashaday keligood la yimaaddaan waa-bar-kuma-taal iyo biyo col dhaanshay, mar haddii aan dadkaaga la dhex keenin Ciidamo Shisheeye oo magacyo badan wata kuwaasoo iyaga kala ilaaliya nabadna u keena?!! Waa in iyaga (Ciidamada Shisheeye) loo daba fadhiisto maamulka nabadda iyo sugidda ammaanka dalka heer kasta oo ay tahayba. Waa in saraakiisha dalka u dhalatay iyo ciddii kale ee lagu tuhmo aqoon milatari ama sirdoonba dhammaanba la eryo oo aanay agagaarka ka soo wareegin, kii ka soo wareegana dhirbaaxo labada indhood lagu dhufto, haddii aan xabsigaba la dhiginna nasiibay lee yihiin!!
Dhinaca kale, madaxda Qaranka oo uu Madaxweynuhu ugu horreeyo, si ammaankooda loo sugo oo looga ilaaliyo ummadda ay xukumaan, waa in ay ilaaliyaan Ciidamo midabo iyo magacyo kala duwan wata. Waa in lagu qaado Kaare iyo Gawaadhi Gaashaamin oo qaaliya, illayn ammaankooda ayaa la sugayaa oo dadkoodaa laga ilaalinayaaye!! Dabcan, Ciidamadaa midabbada iyo magacyada kala duwan wata waxa ku baxaya kharash iyo adduun xad-dhaaf ah illayn nabad bay kuu wadaane; waxaas oo dhammina adigey dummaddaada yihiin oo isku qaba. Waxa u rahman Bad iyo Berriba wixii Khayraad dalkaaga ku jira! Xataa dadkaa la rahmayaa hadii loo baahdo!
Ummadda Somaliland taa may yeelin ee iyagaa la yimid nabad-iyo-xasilooni- waarta. Iyagoon cidna u daba-fadhiisanin walaalaynta iyo is-weheshiga shicibkeeda, Somaliland waxay si la yaab leh u dhamaystirtay dhammaanba kaabayaasha nabadgelayada ee lagama-maarmaanka u ah jiritaanka qaranka.
B. Dawladnimada iyo Dimuqraadiyadda:
Dawladnimada iyo dimuqraadiyadda aad la timaado waa-bar-kuma-taal iyo biyo col dhaanshay, mar haddii dawladnimada iyo dimuqraadiyadda aad qaadatay aanay u adeegayn danaha dhaqan, kuwa dhaqaale iyo kuwa bulsho ee dalalka reer galbeedka ah. Dawladnimadaada iyo dimuqraadiyaddaadu waa-bar-kuma-taal, mar haddii aanay caado kuu noqon waxaad markii hore ceebta u taqaannay; oo aanad daaqadda ka tuurin wixii aad lahaan jirtay! Ha noqoto dhaqan, caado iyo kala-dambayn bulshoba.
Ummadda Somaliland taa may yeelin ee waxay is-waafajiyeen hannaanka dimuqraadiyadda iyo hab-nololeedka bulshad JSL taasoo si dhab ah uga tarjumaysa baahiyaha dhabta ah ee jira, isla markaana la jaan-qaadi kara hadafka iyo hiigsiga ay ummaddani leedahay.
C. Kobaca Dhaqaalaha iyo Hurumarka Bulshada:
Koboca dhaqaale iyo horumarka bulsho ee ay ku tallaabsadaan ummad iyagu isku tashaday, waa-bar-kuma-taal iyo biyo col dhaanshay, kol haddii aanay lug ku lahayn, oo aanay kula maamulin, kula qorshaynin oo kuu qiyaasin Haya’daha Faafiya Faqriga iyo Baahida Dunida (World bank iyo IMF).
Ummadda Somaliland taa may yeelin ee iygoo eex iyo xaq-darro weyn ka tirsanaya beesha caalamka oo ayna cidina ka caawin dib-u-dhiska dalkoodii iyo dhaqaalahoodii la bur-buriyey; waxay go’aansadeen inayna gacmaha hoorsan oo ayna cidna isku hallayn. Waxay u dhaqaaqeen dib-u-dhiska dalka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha, dhiirri-gelinta suuqa xorta ah, iwm. Muddo 22 sano ah waxay ku sifoobeen inay yihiin mucjisada Geeska Afrika.
Horumarka dhan kasta ah ee sida cad u muuqdaa waa maxsuulkii kartida iyo awoodda ummad iyagu ku tashaday inay ka maar-maan gacan-hoorsi shisheeye. Samir, dulqaad, dedaal, garashada togan iyo quluubta wada-jirta ee ummadda Jam. Somaliland ayaa keentay guushaa la isku quudhi la’ayahay.”
Waxaa Allah mahaddii ah in nabadda, xasiloonida, degenaanshaha iyo kala dambaynta aynu maanta ku naaloonayno ayna wax deyn ah innagu joogin, dalkeenuna aanu-u-rahmanayn, oo aanay cidina innoogu tar sheeganayn.
Waxaa Allah mahaddii ah in Dawladnimada iyo Dimuqraadiyadda aynu qaadannay ay tahay mid daaraddeena ka baxday oo aanay inagu ahayn ergise iyo mid degel-shisheeye la innooga soo daabulay!!
Waxaa Allah mahaddii ah in koboca dhaqaale iyo horumarka bulsho ee ay Somaliland muddada 22-ka sano ah dhisaysay; aanu haba yaraatee ahayn mid ku yimid qaadhaan iyo gacan-maris ay beesha caalamku innoogu yabooheen.
Haddaba, xilli ay si aad ah isu soo tarayaan hadimooyinka iyo hagar-daamada qorshaysan ee ka dhanka ah Qarannimada iyo Gooni-isutaagga JSL; waxay ila tahay in beesha caalamku ay ummadda Jam. Somaliland ku leeyihiin: ……………
INSHA ALLAH: La Soco (Qaybta 3-aad) ee maqaalkan taxanaha ah:
Somaliland Waa Qaran Guulaystay; Qaran Fashilmayna ma Haybsan Karo!
SOMALILAND HA NOOLAATO, KA NAXOW NAFTA WAA!!!!